The Boys Season 3: Jensen Ackles သည်သရုပ်ဆောင်ရန်အတွက် Soldier Boy အဖြစ်သရုပ်ဆောင်သည် - တီဗီ
Boys Season3Jensen Ackles Join Cast
Jensen Ackles သည် The Boys Season3သရုပ်ဆောင်မှုတွင်ပါဝင်ရန်ကောလဟာလများထွက်ခဲ့သည် (Albert L. Ortega / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
Lovecraft သည် Netflix တွင်ရှိသလော။ ဒီရုံးကမင်းသမီး Angela နဲ့ Dwight တို့ကဒီကပ်ရောဂါကိုဘယ်လိုကိုင်တွယ်မယ်ဆိုတာပြသခဲ့သည်
Jensen Ackles သည် The Boys ရာသီ3တွင်ပထမဆုံးသဘာ ၀ သရုပ်သဏ္postာန်လွန်သရုပ်ဆောင်ခြင်းတွင်ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်
ဂျင်ဆင်အက်လက်စ်သည် ၁၅ ရာသီပြီးနောက် Supernatural ၌သူ၏ပထမဆုံးအဓိကနောက်ဆက်တွဲအစီအစဉ်ကို Instagram မှတစ်ဆင့် The Boys ရာသီ3တွင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
Instagram ကိုယူပြီး သဘာဝလွန် ကြယ်ပွင့်သူတစ်ချိန်ကသူပြုပါလိမ့်မယ်အဘယျသို့ခဏအံ့သြခဲ့ရဲ့မှတ်ချက်ချထားတဲ့အတွက်ဒါ - သိမ်မွေ့သောတိုယိုတာဗီဒီယိုကျဆင်းသွားသည် သဘာဝလွန် နောက်ဆုံးဒီနှစ်အဆုံးသတ် ဒါကြောင့်ထွက်လှည့်အဖြစ်, သူသည်ယခုအတွက်အခန်းကဏ္ booking ဘွတ်ကင်အတွက်ထိုမေးခွန်း၏အဖြေကိုတွေ့ပြီ ယောက်ျားလေးများ ရာသီ 3!
netflix အပေါ်ရာသီ3flash ကို
အဆိုပါအပြောင်းအရွေ့နှင့်အတူ Ackles ပြန်လည်ပေါင်းစည်းပါလိမ့်မယ် သဘာဝလွန် 's စီးရီးကိုဖန်တီးသူအဲရစ် Kripke, သည်လည်း buzzy စူပါဟီးရိုးဒရာမာ၏ဖန်တီးသူနှင့် showrunner ဖြစ်ပျက်သူ။ ကြေညာချက်မှတဆင့်သရုပ်ဆောင်ကဲ့ရဲ့တုံ့ပြန်မှု TVLine မှတဆင့် Kripke သည် Ackles နှင့် ထပ်မံ၍ အတူတကွအလုပ်လုပ်ရန်အခွင့်အရေးရရှိခဲ့သည် ယောက်ျားလေးများ။
ငါငယ်ငယ်တုန်းက Jensen Ackles ကို ၀ င်ငွေကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုရစေဖို့စိတ်ကူးယဉ်ပြီးမဖြစ်နိုင်တဲ့အိပ်မက်မက်ခဲ့တယ်။ ငါအိပ်မက်အကောင်အထည်ဖော်ပြီပြောပျော်ရွှင်မိပါတယ်။ Jensen ဟာအံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးပိုကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးနွေးထွေးတဲ့ချောကလက်ကွတ်ကီးတွေကိုအနံ့ရစေတဲ့အတွက်သူ့ကိုညီအစ်ကိုတစ်ယောက်လို့ထင်ပါတယ်။ Soldier Boy အနေဖြင့်ပထမဆုံးစူပါဟီးရိုးအဖြစ်သူသည်ဟာသ၊ pathos နှင့်အန္တရာယ်များကိုဤအခန်းကဏ္ to သို့ယူဆောင်လာလိမ့်မည်။ ငါနောက်တဖန်သူနှင့်အတူအ set အပေါ်ဖြစ်ဖို့စောင့်ဆိုင်းနှင့်နည်းနည်းဆောင်ကြဉ်းလို့မရပါဘူး သဘာဝလွန် ရန် ယောက်ျားလေးများ ။
ငါနောက်ဆုံးတွင်ဒီနှစ်အဆုံးသတ် @cw_supernatural ... .w ... ဘာလုပ်ရမှန်းစဉ်းစားနေတယ်။ ထိုအခါငါကငါ့ကိုနှိပ်ပါ။ * အသံအတိုးအကျယ် *
အခါမိုဃ်းမျက်နှာကြက် Netflix ပျေါမှာရှိပါလိမ့်မယ်
မျှဝေသည် Jensen Ackles (@jensenackles) သြဂုတ် ၁၇၊ ၂၀၂၀ မှာည ၉း၀၀ နာရီ PDT မှာ
Ackles ကိုချစ်ကြောင်းပြသခြင်းအပြင် Kripke သည် Ackles ၏ပြသမည့်တတိယရာသီတွင်မည်သူမည်ဝါအတိအကျကိုလည်းအသေးစိတ်ပြောကြားခဲ့သည်။ Kripke ဖော်ပြချက်အရ Ackles သည် Solider Boy ကိုကစားလိမ့်မည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းကစစ်သည်သည်သွက်လက်မှု၊ လုံ့လရှိမှုနှင့်လက်နက်မဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းစွမ်းရည်များဖြင့်စူပါကျော်ကြားမှုကိုရရှိခဲ့သည်။
ဒါ 15 ရက်နေ့တွင်ဒင်း Winchester ကကစား၏ပြီးနောက် Ackles ရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးအဓိကရုပ်မြင်သံကြား Gig မှတ်သားပါလိမ့်မယ် သဘာဝလွန် ၎င်း၏နောက်ဆုံးခုနစ်ခုဖြစ်စဉ်များနှင့်အတူဒီကျဆုံးခြင်းမှအနီးကပ်မှလာလိမ့်မည်သည့်အရာ။
တီ သူကယောက်ျားလေးများ ရာသီ2အမေဇုံချုပ်အပေါ်စက်တင်ဘာ4သောကြာနေ့ပြသခဲ့သည်။ ရာသီ (၃) အတွက်ကြိုတင်ရက်သတ္တပတ်ကိုကြေညာခြင်းမရှိသေးသော်လည်းပရိသတ်များသည် Jensen Ackles ၏နောက်ဆုံးဇာတ်လမ်းတွဲများကိုဖမ်းစားနိုင်ကြသည်။ သဘာဝလွန် ဒီ CW အပေါ်ဤကျဆုံးခြင်း။
Jensen Ackles ရဲ့သရုပ်ဆောင်မှုမှာပါ ၀ င်မယ်လို့ကြားရတာကိုသင်စိတ်လှုပ်ရှားမိပါသလား ယောက်ျားလေးများ ရာသီ ၃?
အလိုတော်ဟိုတယ် transylvania3ထွက်လာကြသောအခါ
နောက်တစ်ခု:၂၀၂၀၊ သြဂုတ်လတွင် Amazon Prime Video တွင်ကြည့်ရှုရန်ကောင်းသောရုပ်ရှင် ၅ ကား
စီးရီးဗဟိုရာသီ9နာရီကိုကြည့်ပါ